Tokinao | Martsa 2009
Война является ускорение истории
Eny, nahateny vazaha mihitsy RaToky noho izao zava-miseho eo amin'ny firenena izao. Tsy noforoniko anefa io lohateny io fa tenin'i Lénine "Teorisianina sosialita malaza". ( nasosoko anio 8aprily2009 : Azoko antoka fa diso tsipelina izy io satria boky amin'ny teny malagasy no nangalàko azy, ary noezahiko navadika ho teny rosiana).
Raha resahina fohy ny fankasitrahako io teorisianina malaza io, dia izao : isan'ny nanandratra avo ny sosialisma izy tany am-panombohan'ity firehan-kevitra iray ity. (izay fomba fitondrana amim-piraisankina : miasa ho an'ny tanindrazana daholo ny tsirairay, ary avy eo dia zarain'ny fanjakana ny tombony). Na dia tsy nahomby aza io petraka nataony io dia hitako ho mifono fahamboniana tanteraka. Ny tsy nampahomby azy moa (araka ny fijeriko) dia noho ny antony maro :
- alaim-panahy hanararaotra ny mpitondra,
- tsy mazoto loatra mba hivoatra ny mponina satria tsy ho azy mivantana ny tombontsoa.
Hatrany am-boalohany anefa dia tsy ireo mihitsy no nokasain'i Lénine, fa ny mba hahavitana asa goavana (ny firaisan-kina mantsy no hery), ary ny mba hikarakaran'ny Fanjakana ny tsirairay.
Tsetsatsetsa tsy aritra ihany iny resaka "Lénine" iny. Fa hiverina amin'ilay fehezanteniny etsy amin'ny lohateny aho : rehefa nandinika ny fivoaran'ny tantaran'ny vahoaka maro maneran-tany i Lénine dia nahita fa "ny ady dia manafaingana ny tantara". (Izany hoe fahatsapana ihany no nataony fa tsy mamporisika velively ny olona hiady akory izy).
Izaho manokana dia mbola mahita fa tena marina io fehezanteny io, satria :
- raha tianao ny hampanan-javatra anao "haingana", dia mangalara, sy manaova fandrobàna. Mba tsy ahafahan'ny tompon-javatra hiteny fotsiny dia: mila matanjaka sy be sandry ianao.
- raha tianao ny ho lasa mpitondra ao anatin'ny fotoana fohy, dia mampiasà hery sy fanonganam-panjakana. Ary mba hahatonga izany hetsika izany hahomby dia entano sy fitaho ny vahoaka mba hanohana anao. Ataovy izay ahazoana ny fanohanan'ny firenena mikambana, eny fa na dia fanambaràna tsy ampiheverana aza izany.
Boribory tokoa ry 'zareo ny tany, ary na dia miova aza ny taon-jato iainana, na dia nivadibadika aza ny arivotaona maro, dia toa miova endrika fotsiny kosa ireo fomba fiainana ratsy : dia ny fomba fanaovana didin'ny be sandry, ny fomba fanararaotana, sns. Taloha manko raha mikasa hanitatra ny fanjakany ny mpanjaka iray, dia mila manafika ny foko manodidina azy. Ankehitriny kosa, raha te ho mpitondra ny olona iray, dia mila manongam-panjakana fotsiny : tsy misy foko havory sy hatambatra intsony fa tonga dia mandray vita :).
Tsy mahagaga, raha io no jerena, ny zava-misy ankehitriny ao Madagasikara. Ny mahagaga dia, ny tsy hisian'izany intsony any aoriana any : Tena ho fahagagana lehibe miposaka ao Madagasikara.
Kely fotsiny moa sisa no saika tsy anoratako ny votoatin'ity lahatsoratro ity amin'ny teny gasy. Ny tenim-pirenena iray manko dia reharehan'ny tompony. Io teny io no mampiseho fa vahoaka lehibe sy manana ny maha-izy azy ny vahoaka iray. Ankehitriny anefa dia tsapako fa resaka be fotsiny ireo heverina ho reharehan'ny Malagasy :
- ny fihavanana : resaka fotsiny io amiko, satria mbola misy ny fanavaham-poko ao Madagasikara. Disoy aho raha misy milaza ny mifanohitra amin'izany ireo mpandehandeha ao Madagasikara. Aleo koa hono very tsikalakalam-pihavanana toy izay very tsikalakalam-bola" hoy i Besapaka ao amin'ny bokin'ANDRIAMANGATAHIANA izay, satria "ny havana mandany vola"
- ny firaisan-kina : tena tsy hita taratra intsony, ankoatran'ireo mbola manao valin-tànana any ambanivohitra. Raha mba hita taratra ihany kosa, dia vao mainka ratsy satria: miray hina hiady sy hifamono fotsiny.
- ny fahaizana mandray vahiny : misy ihany izy ity ... fa ny fijeriko dia satria noho ny mampahantra ny Malagasy no antony mahasariaka azy amin'ny vahiny. Jereo ange ireny mpivaro-tena tsy mila gasy ireny e! Ny vola no tena tiana ho azo.
Aleo taperiko eo ny lisitra satria ...
te hatory aho :).
# Posted by tokinao :: Resaka mandalo:: Hametraka hevitra (34) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)